Muuri News Network » DAAWO: Caruurtii lagu Qabtay Dagaalkii Suuj oo Xog Cusub bixiyey iyo Deegaanada ay ka soo kala jeedaan
DAAWO: Caruurtii lagu Qabtay Dagaalkii Suuj oo Xog Cusub bixiyey iyo Deegaanada ay ka soo kala jeedaan
Waxaa habeenimadii xalay magaalada Garowe ee xarunta Puntland lasoo gaarsiiyey qeybtii ugu horeysay ee maxaabiistii laga soo qabtay deegaanka Garmaal, maxaabiistan oo kamid ahaa maleeshiyaadkii ku dagaalamay Togga Suuj.
Maxaabiista la keenay Garowe ayaa waxaa ku jiray tiro dhowr ah oo caruur aad u da’ayar iyo dhalinyaro kale oo sheegay in Al Shabaab kasoo kaxeysteen qoysaskooda oo kala jooga gobalada dalka, Waxaana dhalinyaradan intooda badan kasoo jeedaan gobalada Hiiraan, Sh/Hoose, Bay, Bakool, Gedo iyo Jubbada dhexe.
Isla xalay ayaa maxaabiista la kala soocay, waxaana maxaabiistii iyagu lasoo qabtay iyagoo dagaalamaya lagu xiray goob gaar, halka iyaguna goob kale la geeyey caruurta aadka u da’ayar iyo dhalinyarada si iskood ah ciidamada isugu soo dhiibay. Waxaa xusid mudan in ay jiraan maxaabiis dhaawac ah oo lagu hayo goobo lagu daryeelayo.
Ciidanka Al Shabaab ay usoo dirtay Puntland ayaa la sheegay inuu ahaa labo ciidan oo laga kala keenay Bay iyo Jilib, kuwaasi oo doonyo kasoo raacay degmada Xarardheer ee koonfurta gobalka Mudug. Waxay ciidankan saarnaayeen 5 doonyood, afar doon ayaa ku degay dhanka Garacad halka 1 doon ay soo gashay dhinaca Garmaal oo ah kooxdii gashay Toga Suuj.
Qaar kamid ah Maxaabiista dhalinyarada ah iyo waliba caruurta ugu da’a yar ayaa ka waramaya halka ay kasoo jeedaan iyo qaabkii ay ugu biireen Al Shabaab, waxayna xog ka bixinayaan siduu dagaalka u dhacay iyo halkii ay doonyaha kasoo raaceen.